UYehova, uThixo Onyanisekileyo Nonobubele Bothando | Sondela
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBaoule IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgesi IsiNiuea IsiNorway IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiThai IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
“Nguwe Wedwa Onyanisekileyo”
1, 2. Kutheni kunokuthiwa uKumkani uDavide wayeqhelene nokunganyaniseki?
UKUMKANI UDAVIDE wayeqhelene nokunganyaniseki. Ngaxa lithile ulawulo lwakhe lwagungqiswa ngamayelenqe awayewenzelwa ngamalungu ohlanga lwakhe. Ngaphezu koko, uDavide wangcatshwa ngabanye babo bekulindeleke ukuba babe ngawona maqabane akhe asondeleyo. Khawucinge nje ngoMikali, umfazi wokuqala kaDavide. Ekuqaleni, ‘wayemthanda uDavide,’ ngokungathandabuzekiyo emxhasa kwimisebenzi yakhe njengokumkani. Noko ke, kamva “wamdelela entliziyweni yakhe,” wada wamgqala uDavide ‘njengomnye wabantu abaziziphukuphuku.’—1 Samuweli 18:20; 2 Samuweli 6:16, 20.
2 Kwandula ke kwabakho umcebisi kaDavide, uAhitofele. Icebiso lakhe lalixabisekile ngokungathi lilizwi elivela ngqo kuYehova. (2 Samuweli 16:23) Kodwa, ekuhambeni kwexesha lo mcebisi uthenjiweyo waba ngumngcatshi waza wabandakanyeka kwiyelenqe lemvukelo nxamnye noDavide. Yaye ngubani owayengumphembeleli welo yelenqe? NguAbhisalom, unyana kaDavide uqobo! Elo qili elalithanda ukusebenzisa amathuba ‘laziba iintliziyo zamadoda akwaSirayeli,’ lazimisa njengokumkani ovukelayo. Imvukelo ka-Abhisalom yayiqine kangangokuba uKumkani uDavide wanyanzeleka ukuba asabe ukuze asindise ubomi bakhe.—2 Samuweli 15:1-6, 12-17.
3. Yiyiphi intembelo awayenayo uDavide?
3 Ngaba akukho mntu owahlala enyanisekile kuDavide? Ebudeni babo bonke ubunzima awayekubo, uDavide wayesazi ukuba wayekho. Wayengubani? Akukho wumbi ngaphandle kukaYehova uThixo. UDavide wathi ngoYehova: “Kulowo unyanisekileyo uya kwenza ngokunyaniseka.” (2 Samuweli 22:26) Kuyintoni ukunyaniseka, yaye uYehova uwumisela njani owona mzekelo ubalaseleyo wolu phawu?
4, 5. (a) Kuyintoni ‘ukunyaniseka’? (b) Ukunyaniseka kwahluka njani kukuthembeka?
4 ‘Ukunyaniseka’ kusetyenziswe eZibhalweni zesiHebhere ukubhekisela ekubonakalisweni kobubele bothando ngokungapheliyo de injongo yokubonakaliswa kwabo ifezekiswe. Kubandakanya okungakumbi kunokuthembeka. Ngapha koko, umntu usenokuthembeka kuba nje enyanzelekile. Kanti kona ukunyaniseka kusekelwe eluthandweni. * Kwakhona, igama elithi “ukuthembeka” linokusetyenziswa nakwizinto ezingaphiliyo. Ngokomzekelo, umdumisi wayibiza inyanga “njengengqina elithembekileyo esibhakabhakeni” ngenxa yokuvela kwayo rhoqo ebusuku. (INdumiso 89:37) Kodwa inyanga ayinakuchazwa njengenyanisekileyo. Ngoba? Kuba ukunyaniseka kubhekisela ekubonakalisweni kothando—nto leyo ezingenakukwazi ukuyenza izinto ezingaphiliyo.
Inyanga ibizwa ngokuba lingqina elithembekileyo, kodwa zizidalwa eziphilayo ezinengqondo kuphela ezinokukuxelisa ngokwenene ukunyaniseka kukaYehova
5 Ngokwengcamango yeZibhalo, ukunyaniseka kuhambisana nobubele. Lowo ukubonakalisayo sukuba enolwalamano oluthile nalowo akubonakalisa kuye. Ukunyaniseka okunjalo akubi yinto yamabona-ndenzile. Akuguquguquki ngenxa yeemeko njengamaza olwandle abhudlwa yimimoya. Kunoko, ukunyaniseka, okanye uthando olunyanisekileyo, luzinzile yaye lunamandla okumelana neyona miqobo inzima.
6. (a) Kunqabe kangakanani ukunyaniseka ebantwini, yaye oku kuboniswe njani eBhayibhileni? (b) Yiyiphi eyona ndlela ibalaseleyo yokufunda ngokunyaniseka, yaye ngoba?
6 Inyaniso ikukuba, ukunyaniseka okunjalo kunqabile namhlanje. Ngokufuthi, amaqabane asondeleleneyo “ayonakalisana.” Aya esanda amanani amaqabane omtshato ahlukanayo. (IMizekeliso 18:24; Malaki 2:14-16) Ngangendlela ezixhaphake ngayo izenzo zobuqhetseba singade sizive sesiphinda amazwi omprofeti uMika owathi: “Onyanisekileyo utshabalele emhlabeni.” (Mika 7:2) Nangona abantu besilela ngokufuthi ukubonisa ububele bothando, ukunyaniseka kuluphawu olubalaseleyo lukaYehova. Enyanisweni, eyona ndlela ibalaseleyo yokufunda ngokunyaniseka kukuhlolisisa indlela uYehova ayibonakalisa ngayo le nkalo yothando lwakhe.
Ukunyaniseka Okubalaseleyo KukaYehova
7, 8. Kunokutshiwo njani ukuba nguYehova kuphela onyanisekileyo?
7 IBhayibhile ithi ngoYehova: “Nguwe wedwa onyanisekileyo.” (ISityhilelo 15:4) Kwenzeka njani oko? Abazange na abantu kunye neengelosi bakhe babonise ukunyaniseka okukhulu ngamaxesha athile? (Yobhi 1:1; ISityhilelo 4:8) Yaye kuthekani ngoYesu Kristu? Akanguye na “onyanisekileyo” obalaseleyo kaThixo? (INdumiso 16:10) Ngoko, kunokutshiwo njani ukuba nguYehova kuphela onyanisekileyo?
8 Okokuqala, khumbula ukuba ukunyaniseka kuyinkalo yothando. Ekubeni ‘uThixo eluthando’—isimntwiso salo kanye olu phawu—ngubani onokubonakalisa ukunyaniseka ngokuphelele ngakumbi kunoYehova? (1 Yohane 4:8) Eneneni, iingelosi kunye nabantu zinokuzibonakalisa iimpawu zikaThixo, kodwa nguYehova kuphela onyaniseke ngomlinganiselo ogqithiseleyo. Njengoko ‘enguNyangelemihla,’ ububonakalise ububele bothando ithuba elide ngakumbi kunaso nasiphi na isidalwa sasemhlabeni okanye sasezulwini. (Daniyeli 7:9) Ngoko, uYehova ungumthombo wokunyaniseka. Ulubonakalisa olu phawu ngendlela olungenakuze lubonakaliswe ngayo siso nasiphi na isidalwa. Khawukhe uqwalasele imizekelo embalwa.
9. UYehova ‘unyaniseke njani kuyo yonke imisebenzi yakhe’?
9 UYehova “unyanisekile kuyo yonke imisebenzi yakhe.” (INdumiso 145:17) Ngayiphi indlela? INdumiso 136 inikela impendulo. Apho kucatshulwe izenzo zikaYehova eziliqela, kuquka ukuhlangulwa okuhlab’ umxhelo kwamaSirayeli kuLwandle Olubomvu. Okuphawulekayo kukuba, ndinyana nganye yale ndumiso igxininiswa ngebinzana elithi: “Kuba ububele bakhe bothando [okanye, ukunyaniseka kwakhe] bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.” Le ndumiso iqukiwe kwiMibuzo Onokucamngca Ngayo kwiphepha 289. Xa ufunda ezo ndinyana uya kuhlatyw’ umxhelo ziindlela ezininzi aye uYehova wabubonakalisa ngazo ububele bothando ebantwini bakhe. Ewe, uYehova ubonakalisa ukunyaniseka kubakhonzi bakhe abathembekileyo ngokuthi azive izibongozo zabo zokucela uncedo nangokuthi athabathe amanyathelo ngexesha elimiselweyo. (INdumiso 34:6) Uthando olunyanisekileyo lukaYehova kubakhonzi bakhe alugungqi logama nje behlala benyanisekile kuye.
10. UYehova ukubonakalisa njani ukunyaniseka ngokuphathelele imilinganiselo yakhe?
10 Ukongezelela, uYehova ubonakalisa ukunyaniseka kubakhonzi bakhe ngokuthi anamathele kwimilinganiselo yakhe. Ngokungafaniyo nabantu abaguquguqukayo, abalawulwa ziingcamango naziimvakalelo, uYehova akaguquguquki kwiimbono zakhe ngoko kulungileyo nokubi. Ebudeni bamawaka eminyaka, imbono yakhe ngezinto ezinjengokusebenzelana nemimoya, unqulo-zithixo, nokubulala, ayitshintshanga. Esebenzisa umprofeti wakhe uIsaya, wathi: “Kwanasebudaleni bukabani isekwaNdim.” (Isaya 46:4) Ngoko, sinokuba nentembelo yokuba siya kungenelwa ngokulandela ulwalathiso olucacileyo lokuziphatha okuhle olufumaneka eLizwini likaThixo.—Isaya 48:17-19.
11. Nika imizekelo ebonisa ukuba uYehova uzigcina ngokuthembekileyo izithembiso zakhe.
11 Kwakhona uYehova ubonisa ukunyaniseka ngokuthi anamathele elizwini lakhe. Xa exela okuthile kwangaphambili, kuyazaliseka. Ngoko uYehova wathi: “Ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam . . . aliyi kubuyela kum ngaphandle kwemiphumo, kodwa ngokuqinisekileyo liya kukwenza oko ndiyoliswa kuko, likuphumelelise ngokuqinisekileyo oko ndilithumele kona.” (Isaya 55:11) Ngokunamathela ngokuthembekileyo elizwini lakhe, uYehova ubonisa ukunyaniseka ebantwini bakhe. Akabenzi balindele ngelize into angazi kuyizisa. UYehova umisela umzekelo ogqibeleleyo kule nkalo kangangokuba umkhonzi wakhe uYoshuwa wathi: “Akukho sithembiso sasilelayo kuzo zonke izithembiso ezilungileyo uYehova awayezenzile kwindlu kaSirayeli; zonke zaba yinyaniso.” (Yoshuwa 21:45) Ngoko, sinokuba nentembelo yokuba asisayi kuze sidaniswe kukusilela kukaYehova ukuphumeza izithembiso zakhe.—Isaya 49:23; Roma 5:5.
12, 13. Ububele bothando bukaYehova bukho “ukusa kwixesha elingenammiselo” ngaziphi iindlela?
12 Njengoko kuphawuliwe ngaphambili, iBhayibhile isixelela ukuba ububele bothando bukaYehova “bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.” (INdumiso 136:1) Kwenzeka njani oku? Okokuqala nje, uYehova uzixolela ngokusisigxina izono. Njengoko kuxutyushiwe kwiSahluko 26, uYehova akakhumbuli ubugwenxa bexesha elidlulileyo umntu abebuxolelwe. Ekubeni “bonke bonile baza basilela kuzuko lukaThixo,” ngamnye wethu ufanele abe nombulelo kuba ububele bothando bukaYehova bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.—Roma 3:23.
13 Kodwa ububele bothando bukaYehova bukho ukusa kwixesha elingenammiselo nangenye ingqiqo. ILizwi lakhe lithi lowo ulilungisa “ngokuqinisekileyo uya kuba njengomthi otyalwe ngakwimisinga yamanzi, onika isiqhamo sawo ngexesha lawo nonamahlamvu angabuniyo, yaye konke akwenzayo kuya kuphumelela.” (INdumiso 1:3) Khawucinge nje ngomthi omkhulu onamagqabi angabuniyo! Ngoko nathi, ukuba siyoliswa ngokwenene liLizwi likaThixo, siya kuphila ubomi obude, nobunoxolo neziqhamo. Ngokunyanisekileyo uYehova uya kuqhubeka ebanika iintsikelelo ngonaphakade abakhonzi bakhe abathembekileyo. Enyanisweni, kwihlabathi elitsha lobulungisa aza kulizisa uYehova, uluntu oluthobelayo luya kuyoliswa bububele bakhe bothando ukusa kwixesha elingenammiselo.—ISityhilelo 21:3, 4.
UYehova “Akayi Kubashiya Abanyanisekileyo Bakhe”
14. UYehova ulubonisa njani uxabiso ngokunyaniseka kwabakhonzi bakhe?
14 UYehova uye wakubonakalisa ngokufuthi ukunyaniseka kwakhe. Ekubeni uYehova engaguquguquki ngokugqibeleleyo, akaze asilele ekuboniseni ukunyaniseka kubakhonzi bakhe abathembekileyo. Umdumisi wabhala: “Ndakha ndangumfana, kungokunje ndimdala, kodwa andikaboni nabani na olilungisa eshiywe ngokupheleleyo, nenzala yakhe ifuna isonka. Kuba uYehova ngumthandi wokusesikweni, yaye akayi kubashiya abanyanisekileyo bakhe.” (INdumiso 37:25, 28) Enyanisweni, njengoMdali, uYehova ukufanelekele ukunqulwa sithi. (ISityhilelo 4:11) Sekunjalo, ngenxa yokuba enyanisekile, uYehova uyakuxabisa ukuthembeka kwethu.—Malaki 3:16, 17.
15. Chaza indlela ukusebenzisana kukaYehova noSirayeli okwakubalaselisa ngayo ukunyaniseka Kwakhe.
15 Ngobubele bakhe bothando, uYehova uye ngokuphindaphindiweyo wabanceda abantu bakhe xa bebandezelekile. Umdumisi uthi: “Uyayilinda imiphefumlo yabanyanisekileyo bakhe; uyabahlangula esandleni sabangendawo.” (INdumiso 97:10) Khawucinge nje ngendlela awayesebenzisana ngayo nohlanga lukaSirayeli. Emva kokuhlangulwa kwamaSirayeli ngokungummangaliso ukutyhubela uLwandle Olubomvu, amculela ingoma uYehova esithi: “Ubakhokele ngobubele bakho bothando [okanye, “ngothando lwakho olunyanisekileyo,” umbhalo osemazantsi we-NW] abantu bakho obahlanguleyo.” (Eksodus 15:13) Ngokuqinisekileyo oko kuhlangulwa kuLwandle Olubomvu kwakusisenzo sothando olunyanisekileyo lukaYehova. Ngoko ke uMoses wathi kumaSirayeli: “Akubanga ngenxa yobuninzi benu kunezizwana zonke le nto abonise umsa kuni uYehova waza waninyula, kuba nanimbalwa kunezizwana zonke. Kodwa kwaba ngenxa yokunithanda kukaYehova, nangenxa yokusigcina kwakhe isifungo awasifungela ookhokho benu, le nto anikhuphe ngesandla esomeleleyo uYehova, wanikhulula endlwini yamakhoboka, esandleni sikaFaro ukumkani waseYiputa.”—Duteronomi 7:7, 8.
16, 17. (a) Kukuphi ukungabi naluxabiso okothusayo awakubonisayo amaSirayeli, ukanti uYehova wayibonisa njani imfesane kuwo? (b) Inkoliso yamaSirayeli yabonisa njani ukuba ‘kwakungekho kuphiliswa’ kuwo, yaye oku kunikela siphi isilumkiso kuthi?
16 Kambe ke, njengohlanga amaSirayeli asilela ukubonisa uxabiso ngobubele bothando bukaYehova, kuba emva kokuhlangulwa kwawo ‘aqhubeka emona ngakumbi nangakumbi uYehova ngokuvukela Oyena Uphakamileyo.’ (INdumiso 78:17) Kangangeenkulungwane, avukela ngokuphindaphindiweyo, amshiya uYehova aza aphethukela koothixo bobuxoki nakuqheliselo lobuhedeni olungazange luwazisele nto ngaphandle kokuwangcolisa. Sekunjalo, uYehova akazange awaphule umnqophiso wakhe. Kunoko, ngomprofeti uYeremiya, uYehova wababongoza abantu bakhe wathi: “Buya, Sirayeli okreqileyo . . . Andiyi kubusanganisa ubuso bam kuni, kuba ndinyanisekile.” (Yeremiya 3:12) Noko ke, njengoko kuphawuliwe kwiSahluko 25, abona baninzi kumaSirayeli abazange baguquke. Kunoko, “baqhubeka bebagculela abathunywa bakaThixo oyinyaniso bewadelela amazwi akhe bebenza intlekisa abaprofeti bakhe.” Waba yintoni umphumo woko? Ekugqibeleni, “wafika umsindo kaYehova nxamnye nabantu bakhe, kwada akwabakho kuphiliswa.”—2 Kronike 36:15, 16.
17 Yintoni esiyifundayo koku? Sifunda ukuba ukunyaniseka kukaYehova akumenzi ukuba avumele uvula-zibhuqe okanye akhohliseke. Enyanisweni, uYehova ‘unobubele bothando obuninzi,’ yaye uyakuvuyela ukubonisa inceba xa kukho isizathu sokwenjenjalo. Kodwa kuthekani ukuba umenzi-bubi akaguquki? Kwimeko enjalo, uYehova unamathela kwimilinganiselo yakhe yobulungisa aze amgwebe ngokuqatha. Kanye njengoko watsho kuMoses, ‘uYehova akakhe amenze msulwa ofanelwe sisohlwayo.’—Eksodus 34:6, 7.
18, 19. (a) Ukohlwaya kukaYehova abangendawo kusiso njani isenzo sokunyaniseka? (b) UYehova uza kukubonisa njani ukunyaniseka kwakhe kubakhonzi bakhe abaye batshutshiswa ukusa kwinqanaba lokufa?
18 Ukubohlwaya kukaThixo abangendawo nako kusisenzo sokunyaniseka. Njani? Esinye isizathu sifumaneka encwadini yeSityhilelo kwimiyalelo uYehova awayinika iingelosi ezisixhenxe esithi: “Hambani nize niziphalaze izitya ezisixhenxe zomsindo kaThixo emhlabeni.” Xa ingelosi yesithathu iphalaza isitya sayo “emilanjeni nasemithonjeni yamanzi,” aba ligazi. Yandula ke ingelosi leyo ithi kuYehova: “Ulilungisa Wena ukhoyo nowayekho, Wena unyanisekileyo, ngokuba uye wagqiba ekuthini, njengoko beliphalazile igazi labangcwele nelabaprofeti, nabo ubanike igazi ukuba balisele. Kubafanele oko.”—ISityhilelo 16:1-6.
Ngokunyaniseka uYehova uza kubakhumbula abo bangqineke benyanisekile ukusa ekufeni
19 Phawula ukuba ekudluliseleni kwayo eso sigidimi somgwebo, le ngelosi yabhekisela kuYehova ngokuthi “Wena unyanisekileyo.” Ngoba? Ngenxa yokuba ngokutshabalalisa abangendawo, uYehova ubonisa ukunyaniseka kubakhonzi bakhe, abaninzi babo abaye batshutshiswa ukusa kwinqanaba lokufa. Ngokunyanisekileyo, uYehova uhlala ebakhumbula abo banjalo. Uyakulangazelela ukubabona kwakhona aba bathembekileyo, yaye iBhayibhile iqinisekisa ukuba unenjongo yokubavuza ngovuko. (Yobhi 14:14, 15) UYehova akabalibali abakhonzi bakhe abanyanisekileyo ngenxa nje yokuba bengasaphili. Kunoko, “bonke bayaphila kuye.” (Luka 20:37, 38) Injongo kaYehova yokubabuyisela ebomini abo abakhumbulayo ibubungqina bokunyaniseka kwakhe.
UBernard Luimes (ngasentla) noWolfgang Kusserow (embindini) babulawa ngamaNazi
UMoses Nyamussua wahlatywa ngomkhonto wafa liqela lezobupolitika
Uthando Olunyanisekileyo LukaYehova Luvula Indlela Yosindiso
20. Ngoobani “izitya zenceba,” yaye uYehova ukubonisa njani ukunyaniseka kuzo?
20 Ukutyhubela imbali, uYehova uye wabonisa ukunyaniseka ngendlela ephawulekayo kubantu abathembekileyo. Eneneni, kangangamawaka eminyaka, uYehova uye “wazinyamezela ngokuzeka kade umsindo okukhulu izitya zengqumbo ezenziwe zafanelekela intshabalalo.” Ngoba? “Ukuze baziwe ubutyebi bozuko lwakhe kwizitya zenceba, azilungiselele kwangaphambili ngenxa yozuko.” (Roma 9:22, 23) Ezi “zitya zenceba” ngabo banotyekelo olufanelekileyo abathanjiswe ngomoya oyingcwele ukuba babe ziindlalifa kunye noKristu eBukumkanini bakhe. (Mateyu 19:28) Ngokuvula indlela yokusindiswa kwezi zitya zenceba, uYehova uye wahlala enyanisekile kuAbraham, lowo wenza kuye esi sithembiso somnqophiso: “Ngokuqinisekileyo ziya kuzisikelela ngembewu yakho zonke iintlanga zomhlaba kuba uliphulaphule ilizwi lam.”—Genesis 22:18.
Ngenxa yokunyaniseka kukaYehova, bonke abakhonzi bakhe abathembekileyo banethemba eliqinisekileyo ngekamva
21. (a) UYehova ukubonisa njani ukunyaniseka ‘kwisihlwele esikhulu’ esinethemba lokuphuma “embandezelweni enkulu”? (b) Yintoni ukunyaniseka kukaYehova okukushukumisela ukuba uyenze?
21 UYehova ubonisa ukunyaniseka okufanayo ‘nakwisihlwele esikhulu’ esinethemba lokuphuma “embandezelweni enkulu” nelokuphila ngonaphakade kumhlaba oyiparadesi. (ISityhilelo 7:9, 10, 14) Nangona abakhonzi bakhe bengafezekanga, ngokunyanisekileyo uYehova ubanika ithuba lokuphila ngonaphakade kumhlaba oyiparadesi. Ukwenza njani oko? Ngelungiselelo lentlawulelo—esona senzo sikhulu sokunyaniseka kukaYehova. (Yohane 3:16; Roma 5:8) Ukunyaniseka kukaYehova kuyabatsala abo baneentliziyo ezilambele ubulungisa. (Yeremiya 31:3) Ngaba akuziva usondele kuYehova ngenxa yokunyaniseka okunzulu akubonisileyo kuthi nasaza kukubonisa? Ekubeni sinomnqweno wokusondela kuThixo, ngamana singalwamkela uthando lwakhe ngokuthi sizimisele ngokuqinileyo ukumkhonza ngokunyanisekileyo.
^ isiqe. 4 Kubangel’ umdla ukuphawula ukuba, igama eliguqulelwe ngokuthi “ukunyaniseka” kweyesi-2 kaSamuweli 22:26 kwenye indawo liguqulelwe ngokuthi “ububele bothando” okanye “uthando olunyanisekileyo.”
1 Samuweli 24:1-22 Ngendlela awasebenzisana ngayo noKumkani uSawule, uDavide walubonisa njani uhlobo lokunyaniseka aluxabisileyo uYehova?
Estere 3:7-9; 4:6-14 UEstere wakubonisa njani ukunyaniseka kobuthixo kubantu bakowabo, wada waxolela ukubeka ubomi bakhe engozini?
INdumiso 136:1-26 Le ndumiso isifundisa ntoni ngobubele bothando, okanye uthando olunyanisekileyo lukaYehova?
Obhadiya 1-4, 10-16 Ukunyaniseka kukaYehova kubantu bakhe kwamshukumisela njani ekubeni abohlwaye abantu bakwaEdom ngenxa yehambo yabo yokunganyaniseki?
Kuthetha ukuthini ukungeneka nokungakhethi buso? Ukucinga ngomzekelo kaYehova kuya kusinceda sizibonakalise ezo mpawu.